Tencent Gaming Buddy misintona ho an'ny Windows 10 (kinova farany) - Softwares
Lasa adala ny lalao taorian'ny fanombohana ny PUBG Mobile ho an'ny Android. PUBG dia nanamora ny filalaovana finday amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny vahaolana avo sy haingana. Fa ny filalaovana finday amin'ny finday avo lenta mety hanorisory ny masonao sy hampihena ny masonao, noho izany dia mila mahazo ny anao ianao PUBG amin'ny PC-nao amin'ny alàlan'ny fampidinana aloha ny Tencent Gaming Buddy ho an'ny windows.
Tencent Gaming Buddy - Fampidirana
Tencent Gaming Buddy dia iray amin'ireo emulator izay be mpampiasa indrindra alaina amin'ny PC na solosaina finday hilalao lalao Android. Navoaka matetika izy ity mba hilalaovana PUBG.
Manome Gamers hiaina fiainana kilalao miavaka amin'ny efijery lehibe io, indrindra ireo tia PUBG. Mamela ny mpampiasa hilalao lalao milamina miaraka amina fikirana maromaro. Tsy ho an'ny PUBG ihany fa ho an'ny lalao Android maro hafa koa.
Ahoana ny fomba ahazoana maimaim-poana PUBG UC?
Tsy nahomby tamin'ny fanombohana ny etona ny PUBG
Maninona no misafidy Tencent Gaming Buddy?
Tencent Gaming Buddy dia iray amin'ireo emulator tsara indrindra manerantany. Izy ireo izao dia mifantoka amin'ny PUBG satria izy no lalao niavaka indrindra, fa avelany kosa ianao hilalao lalao Android maro hafa hilalao amin'ny varavarankely.
Tencent Gaming Buddy dia malaza noho ny fisongadinana, ny fisongadinana ary ny tolotra omeny. Ka ny antony voalohany hisafidianana Tencent dia ny filanao emulator hilalaovana ny lalao tianao indrindra, PUBG amin'ny varavarankely. Maka tahaka ny fahafinaretana amin'ny fomba feno izy io.
Azonao atao ny milalao ny lalao miaraka amina endri-javatra mitovy amin'izany fanapahan-kevitra avo lenta, sary, valisoa isan'andro ary na dia ny firesaka am-peo amin'ny namanao amin'ny PC aza ataonao amin'ny findainao rehetra. Matetika, ny emulateur hafa dia mamela anao misintona ireo lalao ary milalao ihany koa, saingy manana fetra voafetra izy ireo hampiharina.
Saingy ny Tencent Gaming Buddy dia tsy misy fetra amin'ny filalaovana ny Lalao Android amin'ny PC. Izy io dia miaraka amin'ireo fonosana rehetra. Ny lalao lalaovina eto dia amin'ny vahaolana avo kokoa noho ny amin'ny smartphone.
Raha ampitahaintsika amin'ireo emulator hafa ny Tencent Gaming Buddy dia tsy mora ny mampiasa azy. Tsy misy fahaizana teknika tafiditra amin'izany, ka saika ny olona rehetra dia afaka mampiasa azy io haingana be. Izy io dia manana interface tsotra ary ahafahan'ny mpampiasa manana fikirana maro.
Azonao atao koa ny manamboatra ny traikefanao amin'ny alàlan'ity emulator ity. Ny iray amin'ireo fiasa mahafinaritra indrindra izay iarahan'ny Tencent Gaming Buddy dia ny lanjany maivana. Ny fampidinana sy fametrahana ny Tencent dia tsy misy fiatraikany amin'ny zava-bitan'ny rafitra mihitsy.
Tolotra manaitra nataon'i Tencent Gaming Buddy:
Tencent Gaming Buddy dia iray amin'ireo tolotra tsara indrindra ahafahan'ny mpampiasa miaina lalao feno amin'ny PC-nao. Izy io dia miovaova amin'ny lafiny rehetra. Ny sasany amin'ireo tolotra manokana dia toy izao manaraka izao.
Mamela anao hanoratra ny gameplay.
Manolotra koa ny mikoriana; azonao atao ny mandefa ny rakipeo lalao amin'ny sasany amin'ireo tranokala streaming lehibe.
Izy io dia manana rafitra fanaovana sarintany tsy misy fangarony izay mamela anao hanana traikefa amin'ny lalao feno.
Mamela ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny pirinty samihafa toy ny HD, Full HD, Ultra HD.
Izy io dia manana endri-javatra hamela anao hilalao amin'ny efijery feno. Manampy amin'ny fidirana an-tsehatra bebe kokoa amin'ny filalaovanao izany.
Fanaraha-maso ny lalao:
Mamela anao hankafy ny lalao ataonao amin'ny teny anglisy sy sinoa amin'ny fiteny tsy misy tohiny.
Inona no mahatonga azy io ho tsara indrindra?
Na dia maro aza ny emulateur, Tencent Gaming Buddy no laharana voalohany indrindra amin'ny tolotra omeny. Maimaimpoana izy io, ary ahafahanao mifehy amin'ny alàlan'ny kitendry sy totozy anao, izay zavatra mahafinaritra tokoa hiaina. Ny zavatra tsara indrindra momba ity emulator ity dia manolotra hilalao ny lalao amin'ny herinaratra kely kokoa.
Fa satria ny PC sy ny solosaina finday dia manana fahefana bebe kokoa noho ny finday avo lenta, azonao atao ny miaina lalao kilalao mivoatra sy mahafinaritra miaraka amin'ny fampivoarana sary sy fanaraha-maso hafa.
Dingana azo sintomina Tencent Gaming Buddy:
Ny fampidinana Tencent Gaming Buddy dia tena mora. Ireto misy dingana vitsivitsy sy mora:
Sokafy ny browser izay ampiasainao amin'ny Windows 10.
Tsindrio izao ny rohy mampidina emulator.
Aorian'ny fipihana ny rohy dia hisokatra ny pejin-tranonkala iray izay ahitanao ny safidin'ny 'start download.'
Tsindrio io safidy io ary andraso ny fisintomana.
Ny zavatra iray mahafinaritra hafa momba ny Tencent Gaming Buddy dia tonga ao anaty fonosana iray izay tsy ilain'ny rindrambaiko fametrahana rindrambaiko fanampiny hametrahana sy hitantanana azy.
Tsy maintsy tsindrio ny safidin'ny fametrahana, ary ny ambiny dia mandeha ho azy. Aorian'ny fametrahana ny programa amin'ny windows-nao, azonao atao ny manokana ny traikefanao amin'ny lalao.
Manohana tanteraka ny lalao endri-javatra toy ny chat amin'ny feo, valisoa isan'andro sy safidy hafa.
Mora sintonina sy apetraka.
Manolotra kilalao manokana.
Izy io dia manohana ny fanaraha-maso ny fitendry sy ny totozy.
Toerana misy anao-sarintany.
Milamina tsara izy io.
Havaozina tsy tapaka izy io.
Tencent Gaming Buddy dia iray amin'ireo lehibe indrindra emulator malaza hilalao lalao Android amin'ny PC-nao ary mankafy traikefa amin'ny lalao feno sy mivoatra.
Mifantoka indrindra amin'ny PUBG ny filalaovana amin'ny windows, izay lalao Android sy IOS. PUBG no lalao finday avo lenta indrindra hatramin'ny nanombohany ny taona 2018. Fa ny Tencent Gaming Buddy dia ahafahanao miaina PUBG sy lalao Android maro hafa hilalao amin'ny efijery lehibe amin'ny PC-nao.
Endri-javatra maro no mahatonga ny Tencent Gaming Buddy ho emulator tsara indrindra ampiasaina. Io dia mamela traikefa milamina tsy misy tohika. Azonao atao ihany ny miditra amin'ny endri-javatra rehetra amin'ny lalao izay nanananao tamin'ny finday avo lenta.
Ao amin'ny PUBG, mamela anao hiresaka amin'ny chat, hahazo valisoa isan'andro, ary saika ny zavatra hafa rehetra hitanao amin'ny findainao finday rehefa milalao PUBG.
Ho fanampin'izany, ahafahanao mirakitra ny gameplays anao, izay azo alefa amin'ny sasany amin'ireo tranokala malaza. Izy io dia programa maivana izay mihodina na dia amin'ny hery kely aza.
Manoro hevitra anao izahay handeha ho an'ny Tencent Gaming Buddy hanana traikefa malefaka sy mahafinaritra amin'ny Windows 10 miaraka amin'ny lalao Android ankafizinao indrindra.
Lalao Niandry Fofon'ny Wild 2 ianao
Ny haren'i Matthew Rondeau amin'ny taona 2022!
firy ny kaonty ao amin'ny disney plus
ny andiany fiambenana an-tserasera maimaim-poana
code xbox live 360 ​​maimaim-poana
mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra an-tserasera maimaim-poana ary tsy misy alaina
roblox xbox fanamboarana toetra amam-panahy
mijery TV feno tantara an-tserasera